Maamulka Jubba oo noqday maamulkii u horeeyay ee dhameystira Kuraasta Aqalka Hoose!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Maamulka Jubba oo noqday maamulkii u horeeyay ee dhameystira Kuraasta Aqalka Hoose!!
Maamulka Jubba oo noqday maamulkii u horeeyay ee dhameystira Kuraasta Aqalka Hoose!!
Halkan Hoose ka akhriso shaxda Kuraasta labada Aqal ee ka kala imaanaya maamul gobolada tirada ay buuxiyeen iyo tirada u dhiman:
Previous PostMUUQAAL Sirta Ka Dambaysa DAMEERAHA Loo Dhoofiyo Dalka Shiinaha iyo Dawooyin La yaab leh oo laga Sameeyo maqaarka Dameeraha Daawo!! Next PostShaki cusub oo ka soo baxay doorashadii Maraykanka kadhacaday & khubaro ku baaqday dib u tirinta codadka Saddex gobol!!